Handravaka loko ny trano ao an-tranonao | Famoronana an-tserasera
Tsy mora ny miatrika areti-mandringana izay nitondra antsika rehetra hody. Ary marina fa tsy fantatsika ny fomba hitantanana tsara an'io karazana krizy io izay tsy ahafahantsika mivoaka avy ao amin'ny trano bongo, na dia afaka manao izany aza isika mitarika amin'ny famoahana ny famoronana an'ity artista ity antsoina hoe Nathalie Lété.
Nanaitra anay talenta tamin'ny talenta i Lété ho an'ny rindrina amin'ny rindrina. Aleo izy manao ny rindrin'ny tranony ho toy ny lamba lamba handoko azy ireo araka ny hitanao amin'ireo sary miaraka amin'ny lahatsoratray ireo.
Su ny hevitra voalohany dia ny handoko fotsy ny rindrina rehetra ary avy eo maka lamina voninkazo. Io no hevitra voalohany tonga tao an-tsainy, satria ny valiny farany dia lavitra ny voalohany; tsy misy zavatra hafa mahita ny atin'ny trano miloko.
Ary raha miditra amin'ny inona isika nanana roa volana handokoana azy manontoloEny, efa vita ny korontana. Raha nanomboka tamin'ny rindrina izy dia niafara tamin'ny jiro, cushion ary ireo singa rehetra izay mazàna mipetraka ao anaty ny efitranon'ny tranonay.
Araka ny hitanao dia tsy namela na inona na inona izy loko ary koa ny taila fandroana Noraisin'izy ireo izany fomba voninkazo izany ary toa tsara kokoa noho izy io. Farafaharatsiny izao dia feno "fiainana" ny trano. Ny aingam-panahy ho an'i Nathalie dia avy amin'ny zavakanto. Indrindra amin'ireo trano any Zalipie any Polonina ireo.
Tsy namela efitrano tao an-trano izy handroahana loko sy ilay feony voninkazo izay protagonista an'ity fanovana zavakanto ity inona no nahatonga anao hijanona. Ilaina ny mijery raha tsy aoriany amin'ny fomba hafa ilay izy rehefa avy nitazona azy, satria tsy zavatra hafahafa fa afaka manome azy ireo "tasy" sy hamita fanovana ny zavatra nofinofisin'izy ireo tany am-boalohany ao an-tsain'izy ireo mamorona.
An'ity ny azy Instagram.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ity mpanakanto ity dia mamoaka ny fahaizany mamorona karaoketra miaraka amin'ny atin'ny tranony